स्थानीय चुनावमा नयाँ दलहरुलाई किन विभेद?
उज्वल थापा print
अचेल सबैतिर ‘लेभल प्लेयिङ फिल्ड’ लाई खुबै महत्व दिइन्छ। अर्थात्, उही धरातल र नियममा खेल्ने। कुनै टिम विशेषलाई मात्र फाइदा हुने गरी नियम बनाउने र बाँकीलाई त्यसबाट वञ्चित गराउने हो भने त्यो प्रतियोगिता नै कहाँ रह्यो र?
वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा यस्तै विभेद गरिँदैछ।
झन्डै दुई दशकपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचन आफ्नो वडा, गाउँ र सहर हाँक्न सबल नेतृत्व चुन्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। हामी पनि चार वर्षदेखि सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। धेरैका निम्ति आशाका किरण छर्न सफल भएका छौं। पहिलोपल्ट दलीय रुपमा चुनाव लड्न खोज्दैछौं। तर, विडम्बना! यहाँ राजनीतिका पुराना टिमलाई मात्र फाइदा हुने गरी नियम बनाइँदैछ। हामीलाई देशभरि एउटै चिह्नमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरिँदैछ। हाम्रा हरेक उम्मेदवारलाई छुट्टाछुट्टै चिह्न लिनुपर्छ भन्दै पाखा लगाउन खोजिँदैछ।
हामीले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्यौं। 'संसदका २८ दलहरुलाई किन एउटै चिह्न दिएको र हामीलाई किन नदिएको?' भनेर सोध्दा 'तपाईंहरु संसद बाहिर भएकाले पाउनुहुन्न' भन्ने जबाफ सुनियो। हामीले 'यो त संविधानको मर्मविपरित भएन र' भनेर पनि सोध्यौं। उनीहरुले एेन देखाएर तेर्साए।
अहिलेको नियमअनुसार एउटै दलबाट उठेका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न पनि मेयरमा बँदेल छाप, उपमेयरमा भैंसी, वडा सदस्यमा खरायो, महिलामा कलम, दलित महिलामा टोपी सम्झिनुपर्ने बाध्यता छ। यतिले नपुगेर अर्को जिल्लामा उही दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न फेरि छुट्टाछुट्टै चिह्न सम्झिनुपर्छ। ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष, वडासदस्यमा लड्न सदनबाहिरको राजनीतिक दलले १६२ वटै फरक-फरक चिह्न लिनुपर्ने हो भने देशभरि के स्थिति होला? जबकि संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछु भन्दै भित्र पसेका संसदीय दलले सबै पदका लागि एक मात्र चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्न पाउने! यो कस्तो लुटतान्त्रिक विधि अपनाएको ? अाम नागरिकलाई कति रनभुल्ल बनाएको?
झन्डै तीन करोड नेपालीको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानीय निर्वाचनलाई अनुचित प्रयोग गर्न पुराना दलहरुको सिन्डिकेटले लगाएको यो नियमले संविधानको मूल मर्मलाई नै कुल्चिएको छ। कुरो एउटा दल वा संगठन विशेषको होइन। हामीले तिललाई पहाड बनाउने दुस्साहस पनि गरेका होइनौं। कुरा लोकतन्त्रमा नेतृत्व चुन्ने विधिमाथिको ठाडो हस्तक्षेपको हो। अनि लुटतन्त्रको जन्जालबाट भर्खरै अार्जेको लोकतन्त्र जोगाउने प्रयासको हो।
देशकै नेतृत्व चुन्ने लोकतान्त्रिक विधिमा हामी सबैले भाग लिनैपर्छ। तर, केहीलाई सजिलो नियम अनि बाँकीलाई गाह्रो नियम बनाउनु सरासर गलत हो। जाँचमा ठिक यस्तै नियम लागू हुने हो भने परीक्षार्थीलाई कति अन्याय महशुस हुन्थ्यो होला?
त्यसो भए के तपाईंहरु अझै पनि वर्षौदेखि कुशासन दिँदै अाएका सीमित दलको सिन्डिकेटले नै स्थानीय तहको बागडोर सम्हालेको हेर्न चाहनुहुन्छ? कुनै पनि नयाँ दललाई छिर्न गाह्रो द्वार वा विभेदकारी नियम बनाएर नेपाली नागरिकलाई झुक्याएको चुपचाप सहनुहुन्छ? के उनीहरुले बनाएको त्यस्तो नियमविरुद्ध बोल्ने बेला भएन र? देशलाई पृथक ‘नयाँ’ नेतृत्व चाहिन्छ भन्दै हरेक नेपालीले आवाज उठाइरहेका बेला नयाँ संगठन (दल) बनाई लड्न खोज्दा लड्नै दिँदैनन् भने तपाईंले खोजेको इमानदार नेतृत्व कसरी स्थापित हुन्छ? राजनीतिमा निर्वाचन मात्र त्यस्तो परीक्षा हो, जसले लोकतान्त्रिक तवरबाट जनताको 'जनादेश' लिई जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। तर, यसमै जानाजान विभेद गरियो भने के गर्ने?
संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा २ (ग) मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। त्यसैको सुनिश्चितताका लागि दल गठन, दर्ता र सञ्चालनअन्तर्गत समान राजनीतिक विचारधारामा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले जनसाधारणको समर्थन र सहयोगका लागि प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबाहेक अन्यलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जस्तो निर्वाचन अधिकृतले चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले जनतालाई सार्वभौम बन्न दिँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको हकबाट वञ्चित गर्छ।
त्यसैले, दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी र स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा राख्ने गरी ल्याइएको यो प्रावधान लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ।
निर्वाचन आयोगले दलको हैसियत दिएपछि दर्ता भएका सबै दल समान हुन् र हुनैपर्छ। बरु दल दर्ताका लागि नै निर्वाचन आयोगले केही व्यवहारिक प्रावधान राख्न सक्छ। अल्पकालीन रुपमा निर्वाचनमा सहभागी दलहरुलाई पहिले नै माग गरेको तथा प्राप्त गरेको दलगत चुनाव चिह्न दिने गरी निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। अझ अाँट्ने हो भने त हामी निर्वाचन अायोगलाई अनुरोध गर्छौं- उम्मेद्वारको नाम र फोटो राखिदिनुहोस्। यो चिह्न वा त्यो चिह्नभन्दा यो नाम र दललाई सिधै भोट हाल्ने विधि सुरु गरौँ। नत्र हाम्रो लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने गरी नयाँलाई विभेद र पुरानैलाई पुरस्कृत गर्ने यो विधिले लुटतन्त्र ल्याउँछ।
हामी लोकतन्त्रका नाममा केही सीमित दलहरुले मात्र गर्दै आएको लुटतान्त्रिक शासनभित्रको यस प्रकारको षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न चाहन्छौँ। फुटबलमै पनि एउटा टोलीको एउटै जर्सी छ अनि अर्को टोलीमा ११ खेलाडीका ११ छुट्टाछुट्टै जर्सी छ भने त्यो टोलीलाई खेल्न कति गाह्रो हुन्छ होला? एकचोटि सोचौं त?
(थापा विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २१, २०७३ ११:०५:४५